I-VPN ehamba phambili yeRoku (2020) - Ukusakaza okuphephile nokungaphazanyiswa - I-Vpn
I-Roku ingenye yamadivayisi wokusakaza athandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Umenzi unamathani wezinketho ezitholakalayo kubasebenzisi.Ungathenga izinhlobo ezahlukahlukene zezinketho zokusakaza kusuka kuhlu lwazo.I-VPN iba yisidingo sabasakazwayo emhlabeni jikelele.
Ungahlola okuqukethwe kwamazwe omhlaba ngosizo lwale software. Sebenzisa i-VPN ene-Roku kuba lula impela. Ngo-2020 wonke umuntu uphelelwa okuqukethwe azokubuka. Sonke sidinga imibukiso emisha yokuzitika ngokweqile. Kulo mhlahlandlela, sixoxa ngezinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN zeRoku yakho. Isazi sethu sizokusiza ekutholeni izinketho ezingcono kakhulu ezitholakalayo.
Kungani usebenzisa i-VPN eneRoku?
I-VPN iba yisidingo kubasebenzisi abaningi. Izifunda eziningi zivimbele okuqukethwe kulezi zinsuku. Abanye abasebenzisi bafuna ukufinyelela kumawebhusayithi avela kwamanye amazwe. I-VPN izokunikeza ukulungiswa okusheshayo nokulula kwalolu daba. Kuyasiza futhi ukuthi uhlale uphephile kuzinhloli ze-inthanethi. Okuqukethwe kwakho nenethiwekhi kuzovikelwa ngo-100%. Abasebenzisi bangehlisa namathuba okuvuza kwedatha. Kuyasiza futhi kubasebenzisi abasakazwa ngamapulatifomu wesifufula ku-Roku yabo. Ezifundeni eziningi, izinsiza zamahhala ze-inthanethi ze-TV azisasebenzi.
Uhlu lwe-Best VPN yeRoku:
Ukuthola umdlalo ofanele wedivayisi yakho ye-Roku kungaba yinselele. Kulo mhlahlandlela, sabelana ngezinketho zethu eziphezulu zezinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN. Ake sibheke okunye, okuzokwenza izimanga kudivayisi yakho.
INordVPN iyinsizakalo yokuvikela online ethandwa kakhulu. Ipulatifomu yabo ithandwa kakhulu phakathi kwabathanda.Ungajabulela umuzwa omuhle wokuphequlula ngokubhaliselwe kwabo. Isoftware iyabiza kakhulu futhi isebenza ngayo yonke imishini. URoku usekela insizakalo yeNord VPN kumadivayisi wabo. Ungayisetha kalula ngezinyathelo ezimbalwa ezilula. Banamaseva angaphezu kuka-5000 + emhlabeni jikelele. Vikela ubuwena ngenkathi upheqa amawebhusayithi ahlukile nezinhlelo zokusebenza zokusakaza.
Akunamkhawulo womkhawulokudonsa noma wedatha nge-NordVPN. Abasebenzisi bangavakashela noma iyiphi ingxenye yomhlaba futhi bajabulele okuqukethwe okungenamkhawulo. Ngakho-ke qhubeka usakaze esinye isiqephu sohlelo lwakho oluthandayo. Ngeke ikukhokhise imali eyengeziwe.
INord inekomkhulu layo ePanama. Inkampani ayisoze yakhipha imininingwane yakho eyimfihlo kunoma ngubani. Imithetho yokuphepha iphephe nge-100% kuwo wonke umuntu lapho. Uhlelo lokusebenza lisebenzisa nokubethela okuncane kwe-AES 256 kungxenyekazi yabo.
Sonke sifuna ukusakazwa ngesivinini esikhulu ngenkathi sibukele imibukiso yethu esiyithandayo. Akekho othokozela ama-lags nama-buffers ngenkathi ebona okuqukethwe. Kuyindlela ephelele yokujabulela idatha yakho.
2. Veza i-VPN
I-Express VPN sekunesikhathi eside iwina insizakalo enhle kakhulu ye-VPN yomklomelo wonyaka. Ipulatifomu yabo ithandwa kakhulu phakathi kwabathandi be-tech.Ungathenga nesevisi yabo ye-premium ngentengo engabizi futhi. Njengamanje, banesaphulelo esikhethekile esingu-49% kumakhasimende amasha. Ukuvula okuqukethwe ucezu lekhekhe lwale software. Inqubo yokuyisetha kunoma iyiphi idivayisi yokusakaza ilula. Ungahlola iwebhusayithi yabo ukuthola okokufundisa.
Finyelela kokuqukethwe okungakhawulelwe
I-Express VPN isebenza namadivayisi amaningi. Banamaseva akhona ezindaweni eziyi-160, asabalale emazweni angama-90 +. Vakashela insizakalo yakho yokusakaza oyithandayo kusuka noma ikuphi. Bheka ipulatifomu usebenzisa ipulatifomu yabo emnandi.
I-Express VPN igcina amakhasimende ayo ezinyaweni. Ipulatifomu yabo ikunikeza okuqukethwe kwekhwalithi ye-premium ngesivinini esikhulu.Ithimba labo lokusekela liyatholakala 24/7. Ungaxhumana ngqo nomuntu ovela eqenjini.
Isevisi ilungele noma ngubani odinga ukuzama ipulatifomu. Ungahlola izici ngaphandle kwengozi. I-Expressvpn inikeza abasebenzisi ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Kuyinto yokuthenga okuhle, engabizi kakhulu.
3. ICyberghost VPN
ICyberghost iyinsizakalo ye-premium ye-VPN enesisetshenziswa esikhulu sabasebenzisi. Zandile kakhulu e-USA ngenxa yokutholakala kwazo kalula. Kuyisoftware yamazwe omhlaba enokwakheka kwesoftware eyingqayizivele. Intengo engabizi yenza ukuthi izuze kakhulu kubafundi abaningi.
Ngenye yezinto eziphansi kakhulu ohlwini lwethu. Izici eziningi ezinhle kakhulu ziyancomeka ngensizakalo enjengale nkundla.Abasebenzisi bangasakaza futhi baphequlule ngaphandle kwemingcele. Siyincoma kubafundi bethu abangatshala imali esikhathini eside esizayo.
Jabulela ukwabelana kontanga okuphephile kokwabelana kontanga
Izifufula zikhathaza kakhulu abasebenzisi be-intanethi. Ezifundeni eziningi, akuphephile ngokuphelele ukusebenzisa ukulandwa kwezifufula ngaphandle kwesikhulumi se-VPN. I-Roku ibeka i-ISP yakho engcupheni futhi. Ungasebenzisa i-Cyberghost VPN njengendlela yokuvikela. Ungayisebenzisa futhi ezinhlelweni zokusebenza zokusakaza ezivela eceleni njengePopcorn Time.
Kunamawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza ze-IPTV ku-inthanethi. Lezi zingxenyekazi zenza abasebenzisi bakwazi ukusakaza imicimbi yabo yezemidlalo abayithandayo.Kumahhala ayi-100% kuwo wonke umuntu ukuzihlola. Kodwa-ke, kungaba nzima ekusebenziseni kwakho. Kunamathani emicimbi yezemidlalo angabiza ukusakazwa. NgeCyberghost VPN, ungasebenzisa amasayithi ayingozi ngaphandle kokukhathazeka.
Ukukhiya kwesifunda kungacasula kithi sonke. Ngeplatifomu yeCyberGhost, kuzoba lula kuwe ukuthi usakaze kahle. Iwebhusayithi emnandi ephelele ukusebenzisa kwakho i-inthanethi. Ungavulela noma yimuphi umbukiso we-TV noma i-movie ngale VPN. Isebenza futhi nganoma iyiphi iwebhusayithi yokusakaza noma uhlelo lokusebenza.
Thola i-CyberGhost VPN
IVypr iyinsizakalo entsha ye-VPN enepulatifomu elula yokusebenzisa. Ilungele labo abasesabelomali esiqinile. Ungonga imali eningi ngezinhlelo zabo zesikhathi eside. Abasebenzisi banesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 sokuthenga okungenangozi. Kukulungele ukusetshenziswa kwakho njengoba kungadingi isikhathi esiningi sokusethela amadivayisi we-Roku.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zeRoku ezitholakalayo njengamanje. Ungasebenzisa i-Vypr kahle nganoma iyiphi yazo.
Akekho ofuna ukusetshenziswa kwakhe kwe-inthanethi kutholakale esidlangalaleni. Ipulatifomu ye-VPN ilula ukusetshenziswa kwakho ngensizakalo. Kulula ukuyisebenzisa futhi ikulethela amathani wolwazi. Isebenzisa ukuhlolwa ukuqinisekisa ukuthi ayikho idatha yakho eya emithonjeni yenkampani yangaphandle. Akekho ohlola idatha yakho futhi ithrafikhi yakho ye-inthanethi iphephe ngokuphelele.
IVyprVPN iza nohlelo lokubethela oluhle. Isebenzisa isevisi yokuqapha izintambo ukukunika ukuphepha okuthuthukile.Isebenzisa umthetho olandelwayo we-AES ukuvikela ngokuphelele. Ipulatifomu inikeza ukuvikelwa kwe-256-bit kubasebenzisi bayo.
Ukusekelwa kwezinsizakalo zokusakaza eziphezulu
IVypr yipulatifomu eyenzelwe ikakhulukazi ukusakaza. Ngumdlalo ophelele webhokisi lokusakaza le-Roku noma i-TV. Le nsizakalo isekela amawebhusayithi aphezulu njengeNetflix, i-BBC iPlayer, iHulu, iPrime Video, nokunye okuningi.
I-IPVanish iyisevisi ye-premium ye-VPN. Izintengo zabo ziphakeme kancane ngokuqhathanisa namanye amapulatifomu. Ungalindela ukuthola ikhwalithi ngemali yakho eyengeziwe. Kuyisoftware ethembekile ye-VPN enensizakalo emnandi yamakhasimende. Kukhona okunikezwayo okuhle okutholakala ngezinhlelo zakho zesikhathi eside.
Abasebenzisi bangafaka imali kalula ngenxa yesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
I-IPVanish izama ukwenza ngokuvumelana negama layo ngokubaluleka kwayo kubumfihlo. Ungapheqa i-inthanethi ngaphandle kokushiya noma yimuphi umkhondo. Kuyindlela elula kodwa ephumelelayo yokuxhumana. Abasebenzisi bangathembela kusevisi yabo isikhathi esihle.
Ukuxhumeka kwakho kwe-VPN kuyadingeka ukugcina izinto zihlolwe. Amawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza zikhomba indawo yakho.Ikhawulela okuqukethwe kwakho namakhono okusakaza. Ungayiqeda ngokusebenzisa umhlahlandlela wokusetha i-IPVanish router.
Ukucwaninga kuyinkinga enkulu kubasebenzisi emhlabeni jikelele. Ungathembela epulatifomu ngoba kukusiza ukuthi ugweme ukuvinjelwa kwewebhusayithi nokusetshenziswa. Abasebenzisi bangasakaza noma yikuphi okuqukethwe okuvela emhlabeni wonke ngale nsizakalo.
Ngakho-ke lokhu bekungukukhetha kwethu okuphezulu kwepulatifomu yeRoku. Sithemba ukuthi ukwazile ukuthola ukuqonda okuhle kuzixazululo zakho zokuxhuma. Qala ukuphepha kwakho ku-inthanethi namuhla ngalezi zinsizakalo ezinhle.